Faalloyinka – Page 19 – Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
Degdeg:- Ahlusunna oo si carro leh kaga hadashay ciidankeedi laga daabulay Dhuusamareeb + Xiisadda oo korodhay..
August 26, 2019 marqaan 0
FAAH FAAHIN SIDA WAX UDHECEEN. Dhacdadii manta Kadhacday Magalada Dhuusamareb Gaar Ahaan Saldhiga Boliska waxay Aheyd Dhacdo Ugub ah Taas oo Ka dhalatay Ciidamo laga qaadayo saldhiga Lona Dabulayo Magalda Muqdisho Tasoo aheyd Tilaabo Aan […]
Akhriso:- Somaliland waxay si naxariis darro ah ula dhaqantaa Caruurta iyo dadka taagta daran “Hay’ad dhagaha kajaftay Biixi”.
Xarunta Xuquuqal iinsaanka Somaliland ayaa Xukuumadda ugu baaqday in Xorriyaddooda loo soo celiyo dhallinyaro 13 bilood ka hor laga soo xidhay Gobolka Sanaag, kuwaasi oo muddada intaa leeg ku xidhnaa Xabsiga dhexe ee Magaalada Hargeysa, […]
Daawo:- Somaliland majiri kartaa hadii ay go’aan gobollada SSC? “Xisbiga wadani oo rajo xumo…”.
Xisbiga wadani ee Somaliland ayaa si raja xumo uga jawaab celiyay hadalkii kasoo yeeray taliyaha meleteriga maamulkaasi. “Somaliland jiri mayso haday gobolada Barigu tagaan” ayuu yiri sargaal katirsan Waddani Oo War Ka Soo Saarey Hadalkii […]
Wax ka ogoow Sababta Shaqaalaha Badan Ee Madaarka Hargeysa Looga Eryay Oo Soomaaliya “Dawladda Somalia ayaa kulug leh”
Dawladda Somaliland ayaa maanta shaqada ka joojisay 42 shaqaale ah, kuwaasi oo ka hawl-galayay garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa. Shaqaalahan ayaa ka mushahar qaadan jiray hay’adda duulimaadyada hawada ee qaramada Midoobey (ICAO). Balse dawladda Soomaaliya […]
Xog cusub:- Dal African ah oo Alshabaab ka caawiyay weerarkii Dusit2 ee Nairobi + Qarashkii kubaxay weerarka.
Baadhitaano hordhac ah ayaa lagu ogaaday halka ay ka timid lacag gaareysa 2.3 billion oo Shilinka Kenya ah taasoo loo adeegsaday weeraddii lagu qaaday hotelka Dusit 2 ee magaaladda Nairobi iyadoo laga soo diray Bank […]
August 25, 2019 marqaan 0
August 25, 2019 marqaan 2
August 25, 2019 marqaan 1
Taliyaha ciidanka Somaliland Nuux taani oo shor jaraaid qabtay ayaa kahdlay arimo kusaabsan dagaalka Coll.Caare kula jiro maamulka Hargaysa. Taliye Taani ayaa sheegay in Caare uu yahay dambiile isla markaana xukunkiisa uu noqonayo toogasho meeshii […]
Farmaajo masii wadi doonaa inta uu joogo xil ka qaadista iyo magacaabista saraakiisha ciidanka?.
August 24, 2019 marqaan 1
Is bed-bedelka Taliyeyaasha Ciidamada Ma Halkooda ka sii socon doonaan mise….? 22-kii bishan Golaha Wasiirada Soomaaliya ayaa is bedel ku sameeyay Taliyeyaasha Ciidamada Qalabka sida, taasoo aheyd markii labaad oo Golaha ay hal mar bedelaan […]
FAALO:- Taliye Guray Cismaan waxa uu ahaa Geesi la garan waayay oo aynu Gabnay”.
August 24, 2019 marqaan 3
Taliyahii Ciidamada Badhan ee Puntland isku dhiibay ayaan doonayaa in aan taariikhdiisa wax idiinka sheego si aad horta u barataan ninka uu ahaa kedibna uga garnaqdaan, inta aanad wax kale samayn bal Sadexdan dhacdo ee […]
Akhriso:- Interpol oo 30sano kadib xafiis kafuratay Muqdisho + Ahmiyadda uu leeyahay.
August 24, 2019 marqaan 0
Magaaladda Muqdisho Waxa albaabada loo furay xafiiska booliiska Caalamiga ah ee INTERPOL, kaasi oo si isku-xiri doona ciidanka xooga bileyska Somalia iyo bileyska ku sugan dhammaan daafaha adduunka, u diyaargarowga X Xafiiska waa si wadajir […]
DAAWO VIDEO:Waraysi Cabdirashid Xidig Arimo Badan,Sheekh Shakuul oo Labada doorasho Sharci Daro Ku Tilmaamay
Dhanka musharrixiintii mucaradka waxay sheegeen in ay qabteen doorasho “uu ku guuleystay Cabdirashiid Maxamed Xidig” oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya. Wuxuu BBC Somali u sheegay in uu isaga yahay “madaxweynaha sida sharciga ah […]
Waxaa Maanta Lagu Xukumay Magaalada Garoowe Maxkamada Sare Puntland Sadex Nin oo Mudo loo haysto Sanadkani Horaantiisi Inay Kufsadeeb Gabadh Yarayd ee 9 Sano Jirka Kadibna Dileen,Puntland Ayaa Maxkamada sare ee Puntland waxay Ku Raacday […]